> Resource > iPhone > iPhone Xaday: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Khasaaray / Xaday iPhone
Iska aad iPhone la xado ama uu lumo? Is deji. Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida aad u badbaadiso xogta aad soo xaday iPhone siyaabo kala duwan. Akhri si aad u bartaan hoos ku qoran.
Qeybta 1: ka ee kaabta Lugood / iCloud Ladnaansho Khasaaray / Xaday iPhone Data
Qeybta 2: Raadi aad u Khasaaray / Xaday iPhone sida ugu dhaqsaha badan
Qeybta 3: ka Your Khasaaray / Xaday iPhone Ladnaansho tirtiray Data ka dib waxaa Helitaanka
Luma aad iPhone weligiis danbeyn? Waxaad weli isku dayi kartaa qaar ka mid ah siyaabaha aan dib ugu heli xogta ku saabsan lumay ama la xaday iPhone, nuugaan sida Lugood ama gurmad iCloud. Haddii aad qorshaynayso in ay sii wadaan isticmaalka iPhone ah, waxa ay noqon doontaa inta badan ka sahlan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in si toos ah loo soo celiyo gurmad oo dhan si aad u iPhone cusub via iCloud ama Lugood.
Haddii aad doonayso inaad ugu bedesho telefoonka ah Android ama dadka kale, taasi uma shaqeeyo. Waxaad isticmaali kartaa qalab cid saddexaad soo saaro gurmad Lugood iyo aad u hesho xogta ka soo baxay waxaa ka mid ah, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows). Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad Lugood. Waxaad ku dhameysan kartaa habka kaliya 2 tallaabo: iskaan iyo soo kabsado.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray / Xaday iPhone Data via Lugood
1. Orod barnaamijka iyo dooran "kabsado Lugood ee kaabta faylasha".
2. Markaas dooran file gurmad si ay u iskaan ah.
3. Waxaa ka dib, waxaad ku eegaan karo oo sax ah waxyaabaha aad rabto in aad iyaga ku badbaadin on your computper.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray / Xaday iPhone Data via iCloud
1. Orod barnaamijka iyo dooran "kabsado iCloud ee kaabta faylasha".
2. Markaas gasho in aad xisaabta iCloud. Ka dib markii in, dooran gurmad aad rabto in aad kala soo bixi oo laga baarayo.
3. Intaa ka dib, waxaad ku eegaan karo oo sax ah waxyaabaha aad rabto in aad iyaga ku badbaadin on your computper.
Sida user iPhone ah, waa in aad ka ogaato Raadi My iPhone, kaas oo si gaar ah loogu talagalay baafinta ah iPhone lumay. Ilaa iyo inta aad Raadi My iPhone waxaa gagadin ku lumay ama la xaday iPhone iyo waxa uu ku xiran internetka, waxaad yeelan doontaa in ay hesho meesha hadda aad iPhone. Waa kuwan sida:
Talaabooyinka si aad u ogaato lumay iPhone / xaday
1. Booqo http://iCloud.com/find .
2. Saxiix in aad xisaabta iCloud isticmaalaya ID Apple.
3. Riix badhanka Raadi My iPhone.
4. Dooro Hel qalabka iPhone haddii aad qotomisay ka badan hal qalab macruufka ah.
5. Your badiyay / xaday iPhone ee goobta ku tusi doonaa khariiradda haddii qalab aad waa online.
6. Haddii aad iPhone waa offline, waxaad sameyn kartaa fursad ay helaan email ah mar kasta oo aad iPhone ku xiran internetka.
Ogeysiis: Waxaa jira in badan oo Chine oo kaa caawin kara in ay helaan ah iPhone ee goobta marka aad u rakibay on your iPhone. Sidaas darteed haddii aad isticmaali barnaamijyadooda kale halkii Raadi My iPhone, waxa kale oo aad ka heli kartaa iPhone u dhex mariyey sidii ay hage user ay.
Ugu dambayntii, aad ka heli aad lumay iPhone oo ka soo dhacsaday. Waa hagaag, waxa habboon in aad marka aad ogaadey in dhammaan xogta ku saabsan iPhone ayaa la tirtiray? Haddii aadan haysan wax gurmad ah, waxa jirta waddo kaliya si aad u hesho xogta lumay, si toos ah baarista iPhone dib u soo ceshano xogta lumay.
Waxa aad u baahan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows).
Download version maxkamad free hoose oo lacag la'aan ah in ay isku day ah oo hore.
Talaabooyinka si aad u hesho xog ku saabsan in aad lumay iPhone / xaday
Waa quruxsan fudud si ay u soo kabsadaan xogta lumay on iPhone. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in la sameeyo 3 tallaabo: Sawirka, Kulanka Xiisaha Leh ceshan.
1. Isku aad iPhone oo ay maamulaan software si ay u iskaan.
2. Markaasuu ku eegaan iyo hubiyo xogta laga helay natiijada scan mid mid.
3. Ugu dambeyntii, sax waxyaabaha aad rabto iyo soo si aad u computer. Taasi waa.
Waa maxay nooca xogta laga heli karaa ka lumay / xaday iPhone la Dr.Fone ee macruufka:
Text Contents: Messages (SMS, iMessages & MMS), Xiriirada, wac taariikhda, Calendar, Notes, waano, Safari bookmark, document App (sida shidin, diridda, WhatsApp taariikhda, iwm Media Contents: Camera Roll (video & sawirka), Photo Stream, Photo Library, lifaaqa Message, lifaaqa WhatsApp, Voice qoraal, farriinta, sawiro App / video (sida iMovie, iPhotos, Flickr, iwm)
Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa hage user faahfaahsan oo ku saabsan sida inuu ka soo kabsado xogta lumay ka iPhone ah noocyada file kala duwan. Kaliya dooro mid aad hoos ku doonayaan guji ku yaal.
Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka iPhone ah
Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Xiriirada aan kaabta
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos on iPhone ah
Sidee inuu ka soo kabsado Photos iPhone Siyaabo kala duwan
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Notes ka iPhone ah
Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Voice cadaymaha
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Call Taariikhda on iPhone ah
Wixii dheeraad ah, waxaad tagi kartaa mawduuca gaarka ah ee macruufka Data Recovery